Nhengo dzeZanu PF kwaMutare Dzinoswera Zvakare Dzakangomirira Kuvhota
Nhengo dzeZanu PF dzakamirira kuvhota musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato musarudzo dzenyika.
Nhengo dzeZanu PF kwaMutare dzaswera zvakare dzakangomirira kuvhota kumaprimary elections ekusarudza vachamirira bato iri musarudzo dzemakunzura nevamiriri vedare reparamende dzichazoitwa gore rino.
Kuvhota uku kwange kusati kwatanga nekuda kwekuti mapepa ekuvhotesa, kana kuti maballot paper ange asati asvika kunzvimbo dzokuvhotera uye gakava rekuti vanhu vaizovhota seyi uye kuti anokodzera kuvhota ndiyani.
Nzvimbo zhinji dzashanyirwa neStudio 7 sarudzo dzange dzisati dzatanga paine makatanwa ekuti nhengo dzeZanu PF dzinobvumirwa kuvhota paWard dzinenge dzakaita seyi.
Dzimwe nzvimbo zvakare dzange dzisati dzave nemapepa anoshandiswa pakuvhota kwacho. KuChikanga-Dangamvura kuward 17 uko kune nhengo sere dziri kuda hukanzura, vanhu vange vangori panzvimbo inozivikanwa kuti Muone, pasina chiri kufamba kubva mangwanani.
Vanhu ava vakaswera zvakare vakamirira nezuro pasina zvakaitwa nenyaya yemapopoto emavhotero evanhu.
Nhengo sere idzi dziri kukwikwidza dzinosanganisira VaDadirayi Mutasa, VaBen Moyo, VaTonderai Nengome, VaDan Rusinga, Amai Elizabeth Nyatoti, Amai Cecilia Razerera, VaInnocent Chidhuma, naVaIsheanesu Ziteya.
Vazhinji vange vauya kuzovhota vange vari kuchema nenyaya yekuswera muzuva nenzara vakangomirira kuti vavhote asi pasina chiri kufamba. Vange vari kuchemawo nenyaya yekushaya nzvimbo dzekuti vazvibatsire.
Amai Rebecca Ziweya mugari wemumusha weHobhouse kwaMutare avo vaswera zvakare vari pamutsetse.
"Nezuro takasvera futi pano nenzara, hapana kana matoilets, tasiya vana kudzimba, ngatiiteyi sevanhu vakuru tongoswerera here chinhu chimwe? Ngavatinyarewo."
Amai Cleopatra Mangezi vanoti vanorwadzikana nekugarira guyo sembwa vachisiya mabasa avo akakosha kudzimba dzavo.
"Kubvira nezuro kuma 5 tingori pano kusvika kuma 7 pasina zviri kufamba saka tanetawo nazvo. Hatina kana matoilets futi."
Asi imwe nhengo yeZanu PF, Amai Babra Rigomeka, avo vanga vari panzvimbo yekuvhotera nhasi vaudza Studio 7 kuti kunonoka kuri kuitwa kuvhotesa zvinenge zvine chinangwa chekuda kubiridzira sarudzo idzi sezvo pari kuvhoterwa pacho pasina chiedza kana kwazove nerima.
"Delay iyi ndeyekuti vanhu vaore moyo vaende kudzimba kuti vakwanise kuisa munhu wavo, manje isusu hapana kwatiri kuenda tiri kutogara pano kusvikira taisa candidate yedu yatiri kuda."
Amai Lina Mtetwa vanoti vachangorindira chete kusvikira vazadzikisa chinangwa chavo chekuvhota.
"Uku kuita kwekuti tisiye zvekuvhota tiende kumba. Mamiriro azvo aya vanhu vachavhota vanenge vava vangani so sezvo vanhu vazhinji vaenda kumba? Isisu tine candidate yedu yatiri kuda kuvhotera, tichaivhotera chete."
VaTawanda Mukodza ndivo sachigaro wevechidiki mubato reZanu PF kudunhu reManicaland, uye ndivo mukuru ari kuona nezvekufambiswa kwesarudzo dzemaPrimary mubato iri. Studio 7 haina kukwanisa kutaura naVaMukodza kuti tinzwe kuti kunonoka kuitwa kwesarudzi idzi kuri kukonzerwa neyi. Sarudzo idzi dziri kuitwa kumaWard gumi nemasere emuguta.